Wondershare TidyMyMusic maka Mac Review - Best TidyMyMusic maka Mac Review
Nke a nkume! - Ọfọn ruru price site Todd Thomas
Nwunye m bụ na m ọcha bụ music n'ọbá akwụkwọ na mac n'elu 15,000 songs mere ụfọdụ search na ụtọ gị website. Gị software bụ ihe ịtụnanya na ọ na-achọgharị m Ọbá akwụkwọ na hụrụ 99% nke na-efu ihe juru m anya. Ya bụrụ na ọ bụ ike ìgwè nile album songs ka otu nchekwa ma maa m ga-eme obere ọrụ. M ukwuu nwere ike ikwu nka nye a-agbalị.
Emebi odachi na gị Song Tags site Todd
Nke a na usoro batara wee kpuo n'oké odachi na m song mkpado. Ihe niile bụ ihe mara ezigbo mma tupu, ma ụfọdụ songs ndị na-efu lyrics na ụfọdụ songs na-adịghị tagged kpamkpam. Usoro ihe omume batara ma were m abụ ndị e tagged n'ụzọ ziri ezi na renamed ọtụtụ ndị albums, ọ bụghị mgbe nile nwere ezi album jaket ma ọ bụ lyrics, na mgbe ahụ ọ tụgharịrị m iTunes music nchekwa n'ime a ọgbaghara nke ọhụrụ albums / nchekwa. Mgbe m nwara iji dozie album Ama, m ga-albums agbajikwa elu n'ime 4 dị iche iche emi na ndị niile na otu mkpado Ama, ma ndị dị iche iche ga-mix ọnụ. M ehichapụ a mmeghe nke a usoro. M na a na-eji iTunes maka afọ na Ahụtụbeghị m ihe ọ bụla otú screwed elu. M kemgbe wepụrụ na re-kwukwara m dum n'ọbá akwụkwọ. Ya anya ka ọtụtụ n'ime ya e gbazie, ma nsọ unyi, ya emewo na ọ na-aga were m ọtụtụ awa dị nnọọ na-azụ ihe m na-ama n'ihu.
M ezigbo anya! Site Yuna
M bụ nnọọ obi abụọ nke tidymymusic, ma ekpebiri m ọ na-apụghị merụrụ ihe ọ bụla ịnwale ikpe. M nwere otutu Korean music na m ibudatara youtube. M na-agaghị atụ anya na a na-enwe ike n'ụzọ ziri ezi mata songs, ma ọ mere. M anya na onye ọ bụla nke m iri ikpe songs elu, na ihe niile bụ ihe ntụpọ na, ma e wezụga genre. Ọ sịrị, "ụwa" kama pop / hip iwuli elu / R & B / Kpop / wdg. Ma n'ozuzu, ọ mere ahụkebe ọrụ.
Nnọọ uru na mfe site Swedborg Morales
Ngwa okụt ozi ahụ iji obere albums; si mainstream ka JPOP Kpop na Pop, na ọbụna Genres dị ka trova Latin American, Salsa, Nwa na Reggaeton. M na-eche ihe ndị magburu onwe ngwá ọrụ ga na-efu efu i nwere ike ide onwe gị ọ bụla data mgbe ọ bụ ihe ọjọọ nakwa na-atụ aro gị adịghị amasị gị.
Hazie ọzọ! Site Trent
Man-a software bụ egwu! M nwee ike idozi m elu iTunes anya ọcha ọzọ!
TidyMyMusic Rocks! Site Kimberly Carver
M mere a nyochaa maka m website. Mụ onwe m naanị ihe ole na ole songs, ma ndị ọzọ na-eji ya kwa na nza nke songs, ma ma otú ahụ, anyị niile hụ ya n'anya. Ebe a \_ 's nyochaa otú i nwere ike ịhụ otú ọ na-arụ ọrụ: http://thehightechsociety.com/wondershare-tidymymusic-review-for-mac/. M wasn \_ 't ugwo ma ọ bụ ihe ọ bụla. Dị nnọọ akafiakde ya dị ka anyị na-atụle ihe ndị ọzọ software omume, ma onye a n'ezie gbapụrụ otú ahụ ka m kpebiri ịbịa-etinye ya na-ekwu otú ọma ọ na-arụ ọrụ na ole anyị niile na-amasị ya. =)
ruru ego site Marcos
Ga-amasị m tinye lyrics ka m nnukwu music n'ọbá akwụkwọ nke 8000 songs. Ma, ọ bụ a ọtụtụ ọrụ ime ya otu otu. M n'anya n'ezie gị omume n'ihi na ọ na-ahapụ m tinye lyrics na ogbe. Fọrọ nke nta okokụre agbakwunye lyrics m nile songs now.
ekele site Christopher
Nwetara ya arụnyere n'ụtụtụ a. Arụ ọrụ nke ọma na m iTunes n'ọbá akwụkwọ. Hụrụ ya n'anya.
Great ọrụ! Site Rozen
Hey .... M ji a usoro ọcha m music n'ọbá akwụkwọ! M nnọọ nnọọ obi ụtọ. N'ihi! Ndị kasị mma omume mgbe maka na mkpado. Ị ga-eme dị ka nnọọ obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị hapụ a version n'ihi na windo! Chere e nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị chọrọ otu ihe ahụ. Nọgidenụ na-arụ ọrụ ọma na-eme ka anyị nwee obi ụtọ. Ekele.
Nice site Thomas
2. Maa a àgwà ngwaahịa. Ọ bụghị nanị na okụt ọkụ egwu, aha, genre, kamakwa album nkà, lyrics. M n'anya n'ezie album nkà. Na ọ bụ dị egwu na gị omume pụrụ inyere m aka wepụ duplicates m n'ọbá akwụkwọ. Hụrụ ya n'anya. Ga nwere ike ikwu iji enyi m.